Weerar lagu qaaday Saldhigyo ay ku sugan yihiin Ciidamo Kenyan ah | Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Weerar lagu qaaday Saldhigyo ay ku sugan yihiin Ciidamo Kenyan ah
Xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxaa ay weerar ku qaadeen Saldhigyo Ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ee kamid ah AMISOM ku leeyihiin degaano ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose.
Saldhigyada weerarka lagu qaaday oo ku kala yaalla deegaanada Qooqaani iyo jasiiradda Kudhaa ee Jubbada hoose, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay Ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab.
Dadka deegaanada Qooqaani iyo jasiiradda Kudhaa ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac, isla markaana ay jiraan qasaaro dhaawac ah oo dad rayid ah kasoo gaaray dagaalka.
Saraakiisha Ciidamada Kenya ee ku sugan Gobolka Jubbada Hoose weli kama hadlin dagaaladaas, hayeeshee saraakiil ka tirsan Ciidamada Jubbaland ee ku sugan degaannada lagu dagaalamay ayaa sheegay in la iska difaacay weerarka Al-Shabaab, haatana ay socdaan howlgallo lagu baadi goobayo.
Saldhigyada Degaano iyo degmooyon ka tirsan Gobolka Jubbada ay ku leeyihiin Ciidamada Kenya ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca weeraro ay ku qaadaan Xubno ka tirsan Al-Shabaab, iyada oo Ciidamada Kenya dhankooda ay madaafiic ku jawaabaan.
Previous articleMareykanka Oo Kenya U Diraya Ciidamo La Dagaalama Al-Shabaab
Next articleMaxkamad sare ee Somaliland oo dalbatay muddada la ansixinayo golayaasha la soo doortay